Madaxweyne Trump oo weerar afka ah ku qaaday guddiga baaraya faragelinta Ruushka… – Hagaag.com
Madaxweyne Trump oo weerar afka ah ku qaaday guddiga baaraya faragelinta Ruushka…
Posted on 2 Maajo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Talaadadi shalay mar kale weerar afka ah ku qaaday Guddiga Gaarka ah ee baaraya suurtagalnimada in Ruushka uu faragelin ku sameeyay doroashadi madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sannadki 2016-di.
dhaleeceynta ka soo baxday Trump ayaa timid kadib marki ay qaar ka mid ah Warbaahinta Mareykanka heleen su,aalo dhowr ah oo madaxa guddiga gaarka ah ee baaraya kiiska Ruushka, Robert Mueller ku doonayo inuu weydiiyo mdaxweyne Trump.
Su,aalahan oo la sheegay in ay ka badanyihiin 40 su,aal ayaa waxaa loo dusiyay wargeyska New York Times . Trump ayaa dusintan ku tilmaamay arrin ceyb ah. Isaga oo markale ku celiyay in baaritankani uu yahay wax aanan jirin oo looga danleeyahay in isaga lagu dhaawaco.
Wargeyska The Times ayaa ku warramay in su,aalooyinka kooxda Mueller ay rabaan in ay baaraan arrimo ku saabsan wixi dhacay inti uu socday ololihi doorashada, saddexdi bilood ee u dhaxeysay doorashada iyo marki xilka loo caleema saaray billowgi sannadki 2017-ki. Sidoo kale waxay rabaan in ay wax ka weydiiyaan 15-ki bilood ee uu xafiiska maamulay.